My iPad ihuenyo bụ nwa! Nke a bụ The Real Idozi. - Iphone
Sprint iphone enweghị kaadị SIM
ihe dị iche n'etiti egbe na falcons
ekwentị na -aga n'ihu na -akwụsị na wifi
Na-egwu egwuregwu ma ọ bụ na-ekiri ihe ngosi na iPad gị mgbe ihe mberede mehiere. Ngosipụta ya ejirila oji kpamkpam ma ị nweghị ike ime ihe ọ bụla ugbu a. N'isiokwu a, m ga-egosi gị ihe-eme mgbe gị iPad ihuenyo bụ nwa otú i nwere ike idozi nsogbu ahụ nke ọma !
Ike Tọgharia iPad
A otutu oge, gị iPad ihuenyo na-agba oji n'ihi na nke a software okuku. N'ọtụtụ oge, iPad gị ka na-arụ ọrụ n'okirikiri! A ike nrụpụta nwere ike nwa oge idozi nsogbu ma ọ bụrụ na gị na iPad na-enwe a software okuku.
atụ nke akwụkwọ ozi maka mbata na ọpụpụ n'asụsụ Spanish
N'otu oge pịa ma jide bọtịnụ ike na bọtịnụ Home ruo mgbe akara Apple pụtara na etiti ngosipụta. Nwere ike ijide bọtịnụ abụọ maka sekọnd 25-30!
Ọ bụrụ na iPad gị laghachiri, nke ahụ dị mma! Ma anyị emebeghị. Enweghị nsogbu software nke mere ka ihuenyo iPad gị dị oji. Ọ bụrụ na nsogbu ahụ na-aga n'ihu na-eme na iPad gị, anyị na-atụ aro itinye ya n'ime ọnọdụ DFU na iweghachi.
Tinye iPad Gị na ọnọdụ DFU
A DFU weghachi bụ ihe kasị dị omimi ụdị weghachi ị pụrụ ịrụ na gị iPad. Ehichapu koodu ya niile ma weghachite ya, nke ga-edozi nsogbu software ezoro ezo. Anyị ike ịkwado na-akwado iPad gị tupu etinye ya na ọnọdụ DFU! Mgbe ị dị njikere ịga, lelee nke anyị iPad DFU mode Walkthrough !
Nhọrọ Mmezi iPad
Enwere ike ịnwe nsogbu ngwaike ma ọ bụrụ na ihe ngosi iPad gị ka dị oji. Ọ bụrụ na nso nso a ị kwụsịrị iPhone gị, ma ọ bụ ọ bụrụ na ekpughere ya mmiri, ụfọdụ eriri nwere ike ịbụ ndị mebiri emebi ma ọ bụ wepụ site na bọọdụ mgbagha.
Debe oge atọrọ na Storelọ Ahịa Apple nke mpaghara gị Genius Bar ma hụ ma ha nwere ike idozi gị ya. Ọ bụrụhaala na AppleCare + kpuchiri iPad gị, ọ ga-abụrịrị na ị ga-enweta mmezi ọnụ.
M na-akwado ụlọ ọrụ ndozi aha ya Pulse , ọkachasị ma ọ bụrụ na ịnweghị atụmatụ nchedo AppleCare +. Ha ga-ezitere gị onye ọrụ akaebe edepụtara ozugbo, ma ị nọ n'ọrụ, ụlọ, ma ọ bụ ụlọ ahịa kọfị dị na mpaghara. Ihe ndozi gị na-ekpuchi akwụkwọ ikike ndụ gị niile, mgbe ụfọdụ ọ ga-adị ọnụ ala karịa Apple!
Ọ bụ Nwa Ime anwansi! Ma ọ bụghị n'ezie…
Emeziri nsogbu ihuenyo ojii gị iPad! Ọ bụrụ na ihuenyo iPad gị agbaa oji ọzọ, ị ga - ama otu esi edozi nsogbu ahụ. Hapụ ajụjụ ọ bụla ị nwere gbasara iPad gị n'okpuru n'okpuru ebe a!
otu esi edozie ihuenyo iphone ojii